အာဆီယံ-တရုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသလို ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်၊ Huaihua မြို့မှ လာအိုနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာမည့် ကုန်တင်ရထားတစ်စင်းအား ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင်၊ ဇွန် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုလျက်ရှိသလို ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း ကြီးမားစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Tea Banh က ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်၊ Huaihua မြို့မှ လာအိုနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာမည့် ကုန်တင်ရထားတစ်စင်းပေါ်သို့ ကုန်စည်များတင်ဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများအား ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဝေဘုန်းဟယ်နှင့် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော အာဆီယံ-တရုတ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေးကို ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Banh က မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အာဆီယံ-တရုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ နယ်ပယ်အားလုံးမှာ အသိအမှတ်ပြုလောက်ဖွယ် တိုးတက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး၊ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုကို မြှင့်တင်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ အထောက်အပံ့တွေလည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ အဓိကကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်လျက်ရှိကာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်မူ အာဆီယံသည်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အာဆီယံ-တရုတ် ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည့် အာဆီယံ-တရုတ် အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့လျက် ခေါင်းဆောင်များသည် အာဆီယံ-တရုတ် ဆက်ဆံရေး သမိုင်းကြောင်း၏ အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သော ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း Banh က ပြောကြားခဲ့သည်။
ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် အဆင့်မြင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုများ မကြာခဏပြုလုပ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု နက်ရှိင်းမှုရှိစေရန် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ မျှဝေမှု တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အာဆီယံ ဦးဆောင်သော မူဘောင်များ၌ ဆွေးနွေးမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ရန်လည်း သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
“တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ် နိုင်ငံများ အပြုအမူဆိုင်ရာကြေညာစာတမ်း အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထိရောက်၍ ရေရှည်တည်တံ့သော အပြုအမူဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ရှေးရှုလျက် အာဆီယံနှင့် အတူတကွလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် မိမိအနေဖြင့် ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အာဆီယံ-တရုတ် နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးသည် ဒေသတွင်း နှင့် ကမ္ဘာကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကြွယ်ဝပြည့်စုံရေးအတွက် အလွန်ပင်အရေးကြီးကြောင်းလည်း ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) စတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကတည်းက ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါကို ကျော်လွှားရန် ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်တစ်ခု ရရှိရန် ကူညီထောက်ပံ့သောအခြေအနေများ ဖန်တီးပေးခြင်း စသည်တို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း Banh က ပြောကြားခဲ့သည်။
“မိမိအနေဖြင့် ဒီလိုချိတ်ဆက်မှုက နယ်ပယ်အားလုံးမှာ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးကူညီမှုကို မြင့်မားစွာ အဆင့်မြှင့်တင်လိုပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အာဆီယံတွင် ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် စသည့်နိုင်ငံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ (Xinhua)
PHNOM PENH, June 23 (Xinhua) — The cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and China has provided mutual benefits and greatly contributed to regional peace, stability and development, Cambodian deputy prime minister and defense minister Gen. Tea Banh said here on Wednesday.
Gen. Banh made the remarks while co-chairing the ASEAN-China Defense Ministers’ Informal Meeting via video link with Chinese State Councilor and Defense Minister Wei Fenghe.
“I am pleased to note that the People’s Republic of China has actively participated in the implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and worked together with ASEAN towards the conclusion of an effective and sustainable Code of Conduct to ensure regional stability and peace,” he said.
“In this connection, I would also like to highly evaluate the friendship and mutual support between China and Cambodia in promoting the development of Cambodia in all fields,” he said.
ASEAN groups Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.■
Photo 1 : Aerial photo taken on Jan. 6, 2022 shows an outbound freight train heading for Laos from Huaihua City, central China’s Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)
Photo2: Staff load cargoes onto an outbound freight train heading for Laos from Huaihua City, central China’s Hunan Province, Jan. 6, 2022. (Xinhua/Chen Sihan)